Nisaraka, ny atao hitrakana indray
Toy ny fahafatesana kely mafaitra sady mangidy ihany ny fisarahana amin’ny olon-tiana. Sarotra tokoa ny miarina amin’izany saingy azo atao kosa anefa fa mila ezaka anaty. Ny atao :
Mankarary ny fo rehefa ny olona notiavina indrindra teto an-tany no manda tsy hitia intsony. Tsy maintsy mitarika dona ao am-po sy ao an-tsaina izany. Mahatonga fisafotofoana anaty satria mifamahofaho ao avokoa ny alahelo, ny hatezerana, ny tsy fahazoana izay mitranga, ny nenina, ny hasarotam-piaro, ny hakiviana eny hatramin’ny faniriana hitroatra aza.
Manaiky fa vita hatreo
Ny dingana voalohany atao raha sendra izany dia ny manaiky fa vita ny tantaram-pitiavanareo. Aorian’izay dia tokony havela hirotsaka ny ranomaso. Ilaina ny mamoaka ny fihetseham-po amin’ny alalan’ny ranomaso mba hahafantaranao ny halalin’ny ratram-ponao. Tsy hanampy anao ny handa fa tsy marary iny fisarahana iny. Hanemotra fotsiny ny fotoana hivoahan’ny ratram-po ny miezaka manafina izany ao anatin’ny asa, ny fampihetseham-batana na ny fomba hafa izay tsy dia mahasoa toy ny zava-mahadomelina ohatra. Dingana tsy azo lalovana ny fanekena izany.
Mizara amin’ny olona mahatoky
Ho mora kokoa aminao ny hizara izany amin’ny hafa. Olona mahatoky iray ihany dia ampy. Tsy tsara koa ny mizara izany amin’olona maro. Na dia tsy hitondra vahaolana ho anao akory aza ny olona hizaranao ny tsiambaratelonao dia hanamaivana ny alahelo ny famoahanao izany amin’ny alalan’ny teny. Ho tsapanao fa misy olona vonona ny hanohana anao. Mbola ho eo foana ny alahelo anefa fa mba tsy ilay karazany manempotra intsony fa efa mba nisinda tamin’ny am-pahany.
Aza mampitamberina ny lasa
Na dia toa mamy ery aza ireo fotoana niarahana dia aza atamberina ao an-tsaina intsony. Vao maika hitarika alahelo ho anao izany. Aza karohina intsony ny antony nahatonga anareo nisaraka. Esory tsy ho hitan’ny masonao ireo zavatra rehetra mampahatsiahy azy. Aza mankany amin’ireo toerana falehanareo. Miova toerana aleha. Miova alavoly raha ilaina.
Tandremo koa anefa ny maka fanapahan-kevitra diso tafahoatra ao anatin’ny safotofoto. Tsy tokony hiova asa noho ny fisarahana amin’olon-tiana ohatra. Aleo miandry ho tony sady mandinika tsara foana vao mandray fanapahan-kevitra, indrindra raha hiankinan’ny safidim-piainana izany.
Aza mikasa hiverina aminy
Mazàna rehefa misaraka toy izao dia manantena foana ny olona nosarahina fa mety ho azo atao ny mifampody.Tsy hampandroso sady tsy hanampy hanasitrana ny ratram-po anefa izany.Raha hijery ny lasa ihany, jereo akaiky amin’ny fo tsy miangatra ny tantaram-pitiavanareo. Tsy maintsy nisy ny banga na ny olana tao matoa tonga tamin’ny fisarahana. Aza terena ho lafatra ao an-tsaina iny tantaram-pitiavana nivalona iny. Hanampy anao hanarina ny amin’ny ho avy ny fijerena izany raha hainao tsara ny manavaka ny zava-nisy tokoa amin’ny nofinofim-pitia.
Miaina ho an’ny tena
Fotoana izao ny hanaovanao izay mahasoa sy mahafinaritra anao. Atao izay hivelaranao tanteraka. Olona falifaly, mirana, manao izay tena mahasambatra azy no manintona ny hafa fa tsy olona malaheloelo velively. Raha vitanao izany dia ho hitanao fa ho avy aminao indray ilay fitiavana.